ကျွန်ုပ်တို့၏အတည်ပြုပြီးသောစာရေးသူများအနေဖြင့် ၄၈၄% ပိုမိုသောကလစ်နှိပ်နှုန်းဖြင့်ရရှိသည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 22, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သင်သည်ထုတ်ဝေသူ၊ SEO ကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ် CMS platform တစ်ခုဖြစ်ပါကသင်အနေဖြင့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးပြီဖြစ်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်. စာရေးသူ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်အချို့သောကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မြင်သာမှုကိုအမှန်တကယ်ပိုကောင်းစေသည့်အလွန်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။
တကယ်တော့ငါဟာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုသူတို့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့တွန်းအားမပေးတဲ့ SEO ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကိုငါမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ငါအတည်ပြုပြီးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မည်သို့ရေးသားခဲ့သည် WordPress တွင်ကြွယ်ဝသောအတိုကောက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ ၎င်းသည် plugin (သို့) ထည့်ရန်မလွယ်ကူသော်လည်း၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်? Google ကနောက်ဆုံးတော့ရှိပါတယ် ဒေတာဖြစ်သည် သင်၏အတည်ပြုပြီးသောစာရေးသူပုံရိပ်သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များမည်မျှထိရောက်သည်ကိုသက်သေပြရန်။ အတွင်းမှာ Google Search ကို ConsoleLabs တွင်သင်၏အတည်ပြုပြီးသောစာမျက်နှာများကိုခြေရာခံရန်ကဏ္ dedicated တစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်သည်။
Martech အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏အတည်ပြုပြီးသောစာရေးသူလင့်ခ်များတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များစာမျက်နှာများ (SERPs) တွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းသည် ၄၈၄% ကွဲပြားမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားစာမျက်နှာများထက်။ ဆိုလိုသည်မှာရှေးရှေးသည် SERP တွင်ရှိသည့်လင့်ခ်များထက်စာရေးသူဓာတ်ပုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လင့်ခ်ကို ၅ ကြိမ်နီးပါးနှိပ်နိုင်သည်။
မင်းကထုတ်ဝေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမင်းကအကောင်အထည်မဖော်ဘူးဆိုရင် rel = စာရေးသူ၊ rel = ငါ့ကို နှင့်ထုတ်ဝေသူ link ကိုသင်ချက်ချင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် SEO ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကဤဖြေရှင်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သင့်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုတွန်းအားပေးသင့်သည်။ သင် CMS ဖြစ်ပါကဤအင်္ဂါရပ်သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်
Tags: google webmaster များ+ googleပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူrel စာရေးသူငါ့ကိုပြန်ပြောrel = စာရေးသူrel = ငါ့ကိုWEBMASTERS
22:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 57 တွင်
ငါ“ rel = author” ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည့် WordPress အသုံးပြုသူများအတွက်။ ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။
ဂူဂဲလ်၏လတ်တလောညွှန်ကြားချက်များ - ပိုမိုရိုးရှင်းသောနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုသင်မည်သို့ပြရမည်နည်း။ တိုးတက်မှု၏ ၄၈၄% အဆင့်တိုးသောကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းသည်လူတိုင်းကိုချက်ချင်းမပြောင်းလဲစေနိုင်ပါ။ စာရေးသူပုံများပြရလျှင်သင်လူမှုရေး Klout အတော်အတန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသည် (အနည်းဆုံးတော့ယခုအချိန်အထိ) ။ တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေသေးနေရာတိုင်းမှာထွက်လှိမ့်ကြသည်မဟုတ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသိရင် ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။
22:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 15 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲလစ်ဇဘက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများရှိရုပ်ပုံများပြသမှုတွင်အချို့သောမမှန်မှုများကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်တွေ့ခဲ့ရပြီ။ ဂူးဂဲလ်သည်ရေးသားသူကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ထပ်တိုးမြှင့်မှုများကိုထုတ်လွှင့်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤနေရာတွင်အနည်းငယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။
28:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 10, 21 တွင်
အကြှနျုပျ၏ပုံရိပ်ကိုနောက်ဆုံးတော့တက်ပြစတင်ခဲ့သည်။ ခဏကြာ Authorship markup လုပ်ရန်ကူညီရန် WordPress plugin ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပါပြီ။ မင်းထင်တာကိုကြည့်ပါ။ အဲဒါက AuthorSure လို့ခေါ်တယ်။ WordPress ကနေကူးယူနိုင်တယ်။
28:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 10, 46 တွင်
အလွန်အေးမြ Elizabeth လိရှဗက်! ငါတ ဦး တည်းရေးသားရန်စဉ်းစားခဲ့ပေမယ့်ဒီငါအများကြီးပိုပြည့်စုံငါစီစဉ်ထားခဲ့သည်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့နှင့်အတူမျှဝေသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
21:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 59 တွင်
exerciseandworkouts.com တွင်ကျွန်ုပ်၏ကလစ် ၃၈% တိုးလာသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးလူအများစုကသံသယဝင်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်အရေအတွက်ကမလိမ်ဘူး
မေလ 18, 2012 မှာ 2: 58 pm တွင်
Hmmn ဖတ်ပြီးကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်တော်မအံ့သြပါ၊ ဒါပေမယ့်စာရေးသူကိုအတည်ပြုနိုင်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ webmaster tools ထဲမှာ“ Author Stats” မရှိပါ။